Pathéရုပ်ရှင်ရုံ Groningen တွင် Gina နှင့် Marinus ကိုနှစ်ကြိမ်သတ်ဖြတ်မှု - Martin Vrijland
Pathéရုပ်ရှင်ရုံ Groningen တွင် Gina နှင့် Marinus ကိုနှစ်ဆလူသတ်မှု
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	အောက်တိုဘာလ 27 2019 အပေါ်	• 24 မှတ်ချက်
"ငါတကယ်ထိတ်လန့်မိပါတယ် ဒီလိုရုပ်ရှင်ရုံမှာလူတိုင်းတစ်ခါတစ်ရံရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုး။ ဒါကထူးဆန်းတယ်ဒါကကောင်စီအစိတ်အပိုင်း 100% Groningen ၏မြို့ကောင်စီဝင် Marjet Woldhuis ၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နောက်ထပ် PsyOp နှင့်ထပ်မံဆက်ဆံပါကဥပဒေအသစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သည့်ထိတ်လန့်ဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းဖြစ်သည်။ ၏သင်တန်းကဆိုပါတယ်မရနိုင်ပါ; သင်ပင်စဉ်းစားလို့မရပါဘူး ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေရသူများအတွက်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းပြီး (ဆိုရှယ်မီဒီယာဆွေးနွေးမှုကိုစောင့်ကြည့်နေသော) troll စစ်တပ်သည်သင့်အပေါ်သင့်ကိုပစ်ချလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးဤခေတ်ရေစီးကြောင်းနည်းပညာခေတ်တွင်, ငါတို့ပြည်နယ်နှင့်၎င်း၏မီဒီယာများအားဖြင့်ကစားခြင်းခံရကြသည်မဟုတ်ကြောင်းမဟုတ်ရင်ဘယ်တော့မှလက်ခံလိမ့်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်သည့်ဥပဒေပြဌာန်း။
တရားသူကြီးတစ် ဦး သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါဆရာဝန်၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲလူများအားသော့ခတ်ထားခြင်းခံရနိုင်သည့်ဥပဒေပြago္ဌာန်းချက်လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်ကရှိခဲ့သည်။ ဤ site မှအသနားခံစာနှင့်ထိုအချိန်ကလူ့အဖွဲ့အစည်းမှအခြားခုခံမှုများကြောင့်ဒုတိယသရုပ်ဆောင်များအသင်း၏အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သည် ဥပဒေကြမ်း Edith Schippers ကနေ။ အချိန်ကမရသေးပါ။ လူများသည်လိုအပ်ချက်ကို ဦး စွာတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အကယ်၍ Ruinerwold 'ghost family' သည်တံခါးပေါက်တိုင်းနှင့်အိမ်နီးချင်းများသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများအဖြစ်မကြာမီကြည့်ရှုနိုင်ရန်တံခါးခုံကိုဖယ်ရှားလိုက်လျှင် အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်ပြုထားသည်။ ဤငွေတောင်းခံလွှာကိုလည်းလက်ခံထားသည်။ လူတိုင်းသည် GGZ အဖွဲ့အစည်းတွင်အဆုံးသတ်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာမင်းကိုလေ့လာစရာအကြောင်းမရှိဘဲသီးခြားအခန်းတစ်ခုထဲပစ်ချပြီးသင်အရူးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ဆေးဝါးအချို့ကိုစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်။
"ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Vrijland ။ ဒီလူသတ်မှုကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အနီးအနားမှာနေတဲ့လူတွေကိုငါသိတယ်။","လူတွေကိုငါကိုယ်တိုင်သိတယ်","ငါ့မှာသူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်","ငါသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလူကိုငါသိ၏","ငါမိသားစုကိုငါသိ၏","အများကြီးဝမ်းနည်းကြောင်းရှိပါတယ်","မဟုတ်ရင်သင်ကိုယ်တိုင်အသုဘလာ, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်မြင်လိမ့်မည်","ငါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုငါသိ၏","ဆွေမျိုးများအတွက်ဒေါသထွက်!","ဒီမစ္စတာErgünတကယ်တည်ရှိကြောင်းကိုငါသိ၏ဒါကြောင့်တုန့်ပြန်မှုများစွာရှိလိမ့်မည်။ အားလုံးမှန်ကန်သည်၊ သို့သော်ယခုနက်ရှိုင်းစွာတည်ရှိမှုကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုများကစောင့်ကြည့်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိလာပြီဖြစ်ရာယခုကျွန်ုပ်တို့သေချာမသိတော့ပါ။ ထို့အပြင်ဇာတ်ကောင်များကိုပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်အာဂျင်တီးနားတွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအသစ်ရှိခြင်းတို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ Deepfakes သည်သမိုင်းတစ်ခုလုံးအပါအ ၀ င်မည်သည့်ဇာတ်ကောင်ကိုမဆိုလက်တွေ့ကျကျဖြစ်စေနိုင်သည် (ဖတ်ပါ ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပုံ) ။ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ကိုလည်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်၊ သင်ကမပြောနိုင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအရာအားလုံး၊ မီဒီယာနှင့်လူမှုမီဒီယာများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သိရှိသည်။ နည်းပညာအရ PsyOps ကိုအတူတကွထားရန်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်က၎င်းကို သုံး၍ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသောဥပဒေများကိုပြဌာန်းရန်သုံးနိုင်သည်ဆိုလျှင်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်ပြီ။
ဤဖြစ်ရပ်သည်စိတ်ရှုပ်ထွေးဖွယ်တွေးခေါ်သူသို့မဟုတ်ပြည်နယ်မူဝါဒနှင့်မပူးပေါင်းပါကမည်သူ့ကိုမဆိုရွေးချယ်ရန်အလွယ်တကူလက်ခံနိုင်သည်။ ထိုအခါသင်သည်ဖက်ဆစ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုသိုးမွှေးသိုးမွှေးဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ခု - သိုးအဝတ်အစားရှိဝံပုလွေတစ်ကောင်သို့ချထားလိုက်ပြီ။
ရဲကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ပုံတင်ကိုတောင်းခံရသည်။ ၎င်းသည် '40 /' 45 အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်လည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲလမ်းပေါ်လျှောက်သွားပြီးမည်သူမျှမမေးသည့်အချိန်ကိုမှတ်မိသေးသည်။ ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမနှစ်ပေါင်း! ၎င်းသည်မတည်ရှိသည့်ဘာသာရပ်သာဖြစ်သည်။ ပိုတစ်ခုခု သင်နှင့်အတူနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ် ID တောင်မှသင်မပါခဲ့ပါ။ ပြyouth္ဌာန်းထားသောဥပဒေအမျိုးမျိုးကြောင့်ယနေ့လူငယ်များသည်သူတို့၏ ID ကိုအမြဲတမ်းအိတ်ကပ်ထဲ၌ထည့်လေ့ရှိသည်။ အချိုရည်များရောင်းသည့်အခါ၊ ဒစ္စကိုနှင့်အခြားကိစ္စများစွာသို့ ၀ င်သောအခါခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ ပြီးတော့ဒါကပုံမှန်လို့ထင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီတာဝန်ကိုစတင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပြproblemsနာတွေရှိတယ်။ ဒါကငါတို့မြင်တဲ့အတိအကျပဲ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး (PsyOp) တွင်အဓိကလူမှုရေးသက်ရောက်မှုပြaနာကိုအမြဲတစေဖန်တီးသည်။ ထို့နောက် (Pauw နှင့်လူမှုမီဒီယာဆွေးနွေးခြင်းကဲ့သို့သောရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့်) တုန့်ပြန်မှုစတင်သည်။ ထို့နောက်ဖြေရှင်းချက်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းပိုမိုတင်းကျပ်သောဥပဒေအသစ်ဖြစ်သည်။
မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်သင်၏ ID ကိုဖော်ပြခြင်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုသာမကသင့်ကိုခွင့်လွတ်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲသင့်အိမ်မှနှုတ်ယူနိုင်သည်။ ထိုအခါသင်သည်ပြတင်းပေါက်မရှိဘဲ GGZ အခန်းတစ်ခန်းတွင်အဆုံးသတ်နိုင်ပြီးသင့်အားမူးဝြေခင်းနည်းနည်းသက်သာစေသည့်ဆေးတစ်လက်ပေးနိုင်ပါသည်။ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်သင်သည်ထိုအခန်း၌ပြတင်းပေါက်များမရှိဘဲထိုင်ပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူအချို့ကိုစတင်ပြသပါက (ဥပမာအားဖြင့်သင် claustrophobic ဖြစ်လာသည်) အကယ်၍ သင်သည် GGZ ကုန်တိုက်သို့သွားမည်ဟုဆိုလိုသည်။ အဘယ်သူမျှမကြက်က crowing ။ ပြီးတော့ဒါကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေအားလုံးကိုသင်လက်ခံပြီးဖြစ်သည်၊ Pathe ကိုလူသတ်မှု၊ အန်း Faber၊ Ruinerwold၊ ဒါဟာထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုသည် လူတိုင်းတစ်ခါတစ်ရံရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ထိုင်ရာအရပ်.
အောက်ပါဗီဒီယိုတွင်သင်ထင်မြင်ယူဆသည်မှာ - "ဒီလူဟာထိုက်တန်တယ်၊ သူကသံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူကိုပြလိမ့်မယ်"
ကျနော်တို့လေးလေးနက်နက် Truman Show ကိုနိုင်ငံရေးနှင့်မီဒီယာယူကိုဆက်လက်
NOS နှင့်ဘန်ဝစ်အပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုကိုယ်ပိုင်နက်ရှိုင်းသောအတုဘဏ်ဍာ mask မှ deepfakes
ဒါအများကြီးရှိပြီးသား Truman Show ကို Daily သတင်းစာ '' အဖြစ်မှန် '' အကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသား
Tags:: ဝမျးနညျးကွောငျးပွခွငျး, အထူးပြုလုပ်ထားသော, ရုပ်ရှင်, တုံ့ပြန်ခဲ့သည်, အံ့အားသင့်, Gina, Groningen က, Marinus, မီဒီယာ, သတ်ဖြတ်မှု, pATH, psyop, လူမှုရေး
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 11: 50
ဟုတ်တယ်၊ သူ 33 ပဲရှိသေးတယ် ...
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 12: 47
33 နံပါတ်သည်နိုင်ငံရေး၊ တရားမျှတမှု၊ ဥပဒေနှင့်မီဒီယာရှိခေါင်းဆောင်များပါ ၀ င်သည့်လျှို့ဝှက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။
သူတို့သည် Trumanshow ကိုထိန်းသိမ်းသောသူများဖြစ်သည်။
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 13: 08
၎င်းသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုမြင်တွေ့နေရသော ပို၍ ပို၍ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည့်ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီဒီယာမှ 'အဓိကလူမှုရေးသက်ရောက်မှုပြproblemsနာများ' ကိုမျက်စိကန်းစွာလက်ခံသောကြောင့်၎င်းအတွက်လိုအပ်သောဥပဒေအားလုံးကိုလက်ခံလိမ့်မည်။
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 13: 16
လူ ဦး ရေသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးဖွယ်ရှိသူများကိုထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးရန်ပြင်ဆင်ထားပုံရသည် (၎င်းသည်လူတိုင်းနီးပါးအတွက်တံဆိပ်ကပ်နိုင်သည်။ ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွင်အတိုက်အခံများဟုခေါ်သည်)
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 13: 23
Ergün S ၏ဇာတ်ကောင်သည် Seinfeld မှ Kramer ကိုအခြေခံသည်
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 14: 44
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 15: 16
“ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုဆေးရုံတင်ထားရတဲ့အမျိုးသမီးကဒီရပ်ကွက်ကိုသူ့ဟာသူတော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ "အဓိကအားဖြင့်ဒီမှာနေထိုင်ပြီးနေထိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ " တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေ၊ အိမ်တိုင်းတွင်သူတို့၌ကိုယ်ပိုင်မြေတစ်ကွက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်သင်သည်ထိုနေရာတွင်နေထိုင်သည်။ အသတ်ခံရသောလူများအတွက်, တူညီတဲ့လျှောက်ထားခဲ့သည်။ "
ဟုတ်ကဲ့ .. ဒါဆိုအိမ်နီးချင်းတွေကသူတို့မသိတာ .. ဒါမှမဟုတ်တကယ်မသိကြဘူး ..
4 Caroline wrote:
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 18: 31
၎င်းကိုသင်အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပြီးလျင်မြန်စွာသိရှိနိုင်သည်။ မာတင်၊ မင်းကိုမင်းကမင်းနဲ့အတူရှိနေခဲ့တာကြာပြီ၊ မင်းငါ့ကို Micha Kat ရဲ့သဘာ ၀ တရားကိုပြသတဲ့ အချိန်မှစ၍ မင်းကိုငါလေးစားမှုများစွာရှိပြီးမင်းဆီကနေအများကြီးသင်ယူခဲ့ရတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 22: 24
John de Mol သည်ဤစာအုပ်နှင့်မည်မျှတက်ကြွစွာဖတ်ရှုနိုင်မည်နည်း။ အခုတော့အိမ်နီးချင်းများကရုတ်တရက်သားကောင်များကိုကောင်းစွာသိလိုက်ပြီလား
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 22: 27
တစ်မိနစ်9မှကြည့်ပါ။ 09 …
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 16: 09
တစ် ဦး ရုပ်ရှင်ရုံအတွက်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု ... အကြီး
30 မှအောက်တိုဘာလ 2019 06: 57
3.33 မိနစ်, ကပိုအရသာရှိတဲ့သဲမရ။
27 မှအောက်တိုဘာလ 2019 20: 46
De Telegraaf သည်နေ့စဉ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖန်သားပြင်နှင့် enceclopedia ဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးသိတယ် De Telegraaf? အမြဲတမ်း! ချက်ချင်းပဲ!
သူတို့ဟာ De Spook ကလေးများ (Drente ရှိ) မှသူတို့ဟာပညာတတ်တွေဖြစ်ပြီး telegraaf ဟာကလေးများ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပို့စ်များကိုဖတ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောသူဖြစ်ကြောင်းသိသည်။ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော incognito mode များဖြင့်လင့်ခ်ကိုဖွင့်ပါ)
ဒါပေမယ့်အမ်စတာဒမ်၊ Hugo de Groot ရင်ပြင်ကိုမမေ့ပါနဲ့
Johny van de H နှင့် Welly နှင့် Schoolenberg တို့သည်အခြားမည်သူမျှမပိုင်ဆိုင်သည့်စိန်ဘောလုံးရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် Agatha Christie ၏ကမ္ဘာ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ သူတို့သိသမျှသမိုင်းအားလုံးဖြစ်သည်။ (၎င်းသည်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်)
ငါနို့ပုံးတစ်လောင်းအတွက်လောင်းချင်သည်၊ ဂျော်နီဗန်ဒီဟမ်ကိုနို့ဘူးတစ်ဘူးပေါ်သို့ပို့လိုက်သည်။ သူသည်ပုလင်းတစ်လုံးဖြင့်ပြန်လာပြီးတိရစ္ဆာန်ထဲတွင်သာရှိသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Matthijs N ကို6pack ကို fristies နှင့်အတူပြန်လာလိမ့်မယ်, ထို့နောက်သူကသူ့အကောင်းဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးပြုကြလိမ့်မယ်။
De Telegraaf သည်အရာအားလုံးကိုနာရီအနည်းငယ်အတွင်းအမြဲတမ်းသိသည်။ ကောင်းတယ်
28 မှအောက်တိုဘာလ 2019 13: 52
ကျွန်ုပ်စာရင်းထဲသို့ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ တရားရုံးအမိန့်မပါဘဲစိတ်ရောဂါကုဆေးရုံသို့ ၀ င်ခွင့်ကိုငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ထားရမည်။
တရားသူကြီးတစ် ဦး ၏ထင်မြင်ချက်အပေါ် မူတည်၍ ဆေးဝါးကိုငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်သည်အမြဲတမ်းတရားဝင်ဖြစ်သည်။
10 နှစ်များအနက်ဒီစာရင်းရဲ့အခွင့်အရေးဘယ်လောက်ခိုင်မာနေသေးလဲ၊ လက်ရှိလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းညွှန်ပြနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။
28 မှအောက်တိုဘာလ 2019 18: 31
AD ကသတင်းပို့ချက်မှာ GGZ သည်သံသယရှိသောရုပ်ရှင်လူသတ်မှုကိုကုသရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခဲ့သည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ငါဟာယခင်အစိုးရဆီက Edith Schippers ဥပဒေကြမ်းအတွက် "ပြProbleနာ၊ PsyOp?
N. Leeman wrote:
28 မှအောက်တိုဘာလ 2019 23: 12
30 မှအောက်တိုဘာလ 2019 07: 01
တန်းတူ ff chipping, သင်ပြီးပါပြီ။
30 မှအောက်တိုဘာလ 2019 07: 06
30 မှအောက်တိုဘာလ 2019 21: 07
ဘလော့ဂါရဲ့ဆောင်းပါး (ဒီနေရာမှာမာတင်ဗရိုင်လန်) ကဒီအဖြစ်အပျက်ဟာအတော်ကြီးကိုပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
စိတ်မချရသောကြောင့်၎င်းနှင့်အတူပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် disinfo ကအတည်ပြုသည်
Gina မှာဘာနာမည်မှမရှိတာဘာကြောင့်လဲ။ ဒါပေမယ့်အသက်
အဘယ်ကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာခရီးသည်ပျော်စရာကောင်းပုံရသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပုံရသည်၊ ပြုပြင်ရန်အတွက်လည်းအရေးကြီးသည်။
လူတွေရှုပ်ထွေးနေကြတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါးအရ (link) အိမ်နီးချင်း၏အဆိုအရအိမ်နီးချင်းဟုသင်ဘာပြောသနည်း၊ အမှန်တကယ်မှန်လျှင်မှန်ပါသည်မှန်လျှင်၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးခြင်းကသင်၏ pancake မှရည်ကိုစားသောအခါသင်ရှုပ်ထွေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ရပ်။
30 မှအောက်တိုဘာလ 2019 21: 14
Groningen ရှိ Bios van Pathee ရှိသန့်ရှင်းရေးစုံတွဲ Marinus & Gina ၏ဓာတ်ပုံ။
30 မှအောက်တိုဘာလ 2019 23: 20
သူက psy-op လို့ထင်လားမမေးဘူးလား။
31 မှအောက်တိုဘာလ 2019 10: 17
သင်၏ယောက္ခမအမည်ကားအဘယ်သို့နည်း။ ထိုအသင်သည် Adje ဖြစ်ပျက်အချိန်တွင်ကြောင်းမမေးခဲ့ဘူးမဟုတ်လော
အကယ်၍ ၎င်းတို့တည်ရှိပြီးသူသည်သူတို့နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်လျှင် (ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်သီးခြားဖြစ်သောကြောင့်၊ များသောအားဖြင့်မန်နေဂျာများသည်သန့်ရှင်းရေးသမားများနှင့်တိုက်ရိုက်မရင်းနှီးသောကြောင့်) ၎င်းသည်၎င်းသည် PsyOp ဖြစ်နိုင်သည်။
31 မှအောက်တိုဘာလ 2019 17: 32
ကျွန်တော်ဟာ Adje ကိုမသိသေးဘူး၊ အရင်မှတ်ချက်တွေမတွေ့ရသေးဘူးသူဟာဇာတ်ညွှန်းရဲ့ယောက်ျားလေးတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုဇာတ်ညွှန်းရဲ့ယောက်ျားလေးတွေ၊ ပရိယာယ်ဆင်သူတွေနဲ့လှည့်ဖြားသူများအတွက်အစေခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ။ လူတွေကလူတိုင်းကအားလုံးကိုမျိုချလို့ပဲ။
31 မှအောက်တိုဘာလ 2019 23: 06
စစ်မှန်တဲ့လားမှားလား ... psy-op
ပြcrisisနာကိုအလဟ to ကုန်ဆုံးရန်ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုပါနှင့်
ငါ့ကိုးကားချက်မဟုတ် .... ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးကဆိုပါတယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စကားမစပ်; ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းသည်ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်!
« လန်ဒန်၊ မန်ချက်စတာ၊ ပဲရစ်၊ ဘာစီလိုနာနှင့်ရော့တာဒမ်တို့ကိုအောက်တိုဘာလတွင် 23 နှင့် 24 တို့တွင်အလံတုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းလော။ (မွမ်းမံ)
NASA မှဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သောတွင်းနက်သည်ပလာစမာ Plasmid ဖြစ်သည် »
မာတင် Vrijland op အစုလိုက်အပြုံလိုက်လျစ်လျူရှုနေစဉ်အစိုးရများကိုသင်မည်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သနည်း။
အဘယ်ကြောင့်သင်သိချင်ပါသလဲ? op အစုလိုက်အပြုံလိုက်လျစ်လျူရှုနေစဉ်အစိုးရများကိုသင်မည်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သနည်း။
Riffian op ပထမအဆင့်မှာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့်သည်ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည် - ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းခလုတ်
1.681 သည်အခြား subscriber များအား join